﻿﻿	ထိုးဆေး | Find My Method
ထိရောက်မှု- ထိုးဆေး အမျိုးအစားများအားလုံးသည် အလွန်ထိရောက်သည်။ သို့သော် အချိန်မှီဆေးထိုးရန် သတိရသင့်သည်။ အချိန်မီဆေးထိုးလျှင် အမျိုးသမီးများ ၁၀၀ လျှင် ၉၉ သည် ကိုယ်ဝန်ကို တားဆီးဖို့ စီမံနိုင်ပါမယ်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ – အများအားဖြင့် ပုံမမှန်သွေးဆင်းခြင်းနှင့် အစာစားချင်စိတ်များလာခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်း (ပုံမှန်အားဖြင့် ၂ ကီလိုဂရမ် သို့မဟုတ် ၄.၄ ပေါင်) ဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသောအမျိုးသမီးများစွာတို့သည် ပထမတစ်နှစ်သုံးပြီးနောက် လစဉ်သွေးဆင်းခြင်း ရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ အန္တရာယ်မရှိပါ !
အားထုတ်ရမှု- နဲ၏ – သင် ၁ လ၊ ၂ လ သို့မဟုတ် ၃ လတစ်ကြိမ် ထိုးရန်လိုအပ်သည် (သင့်အခြေအနေနှင့် ရှိသည့်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍) ။
သန္ဓေတား ထိုးဆေး အကျဉ်းချုပ်
ဟုတ်တယ် ဒါပဲ စိတ်ထဲရှိနေတယ် ဆေးထိုးပိုက်၊ အပ်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းသို့ထိုးရန် အရည်အချို့။ ထိုးဆေး ဟာ သင့်ရဲ့သားဥအိမ်ကို မျိုးဥမလွှတ်နိုင်အောင် တားဆီးပေးတယ်။ ၎င်းသည် သားအိမ်ခေါင်းချွဲကိုထူစေပြီး သုက်ပိုးကို မျိုးဥသို့မရောက်ရှိစေရန်တားဆီးပေးသည်။ မတူကွဲပြားသောအမျိုးအစားများရှိသည် – အချို့ကို သင့်နိုင်ငံတွင် ရချင်မှရနိုင်ပါမည်။.
လစဉ်ထိုးဆေး ၎င်းသည် သင့်အား တစ်လကာကွယ်ပေးထားသည်။ progestin and estrogen ဟော်မုန်း ၂ ခုပါ ၀ င်သည်။.
NET-EN သို့မဟုတ် နှစ်လခံလထိုးဆေး – ၎င်းတွင် progestin ပါရှိသည်။ ၎င်းသည် သင့်အား နှစ်လကြာကာကွယ်ပေးသည်။ အီစထရိုဂျင်ကိုမသောက်နိုင်သောအမျိုးသမီးများအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ခွင့် .
DMPA သို့မဟုတ် သုံးလခံ ထိုးဆေး: ၎င်းတွင် progestin ပါရှိသည်။ ၎င်းသည် သင့်အား သုံးလတာ ကာကွယ်ပေးထားသည်။ အီစထရိုဂျင်ကိုမသောက်နိုင်သောအမျိုးသမီးများအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ခွင့်.
သင်နေ့စဉ်ဆေးမသောက်လိုလျှင်၊ ထိုးဆေးထိုးခြင်းကို ကောင်းသောရွေးချယ်ခွင့်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ၁ လ (လစဉ်ဆေးထိုး)၊ ၂လ (NET-EN) သို့မဟုတ် ၃ လ (DMPA) တစ်ကြိမ် သတိရရန်သာလိုအပ်သည်။ ဆေးထိုးရန်အတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်ထားသောလူထုကျန်းမာရေးလုပ်သားများနှင့် တွေ့ရန် လိုအပ်လိမ့်မည်။
လုံးဝ မသိနိုင်။ မည်သူမျှ သင်ထိုးဆေးသုံးထားကြောင်း မသိနိုင်ပါ။ လိင်မဆက်ဆံမှီ ဘာမှလုပ်နေစရာ မရှိပါ။
ဟုတ်တယ်၊ အပ်တွေတော့ ပါတာပေါ့။ အပ်ကြောက်ပါက ထိုးဆေးနှင့် အဆင်မပြေပါ။ တကြိမ်ထိုးရုံနှင့် ၁လ၊ ၂လ သို့ ၃လထိ ရပြီဆိုတာ သတိရပါ။
နှောင်းပိုင်း ဆေးထိုးစည်းမျဉ်းများ။ ဆေးထိုးဖို့ရက်စွဲကို လွတ်သွားသလား။ သင့်အား ကာကွယ်ပေးနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ DMPA ထိုးဆေး (၃ လခံ ထိုးဆေး) ကို ၄ ပတ်အကြာအထိ နောက်ကျထိုးနိုင်သည်။ NET-EN (၂ လထိုးဆေး) ကို ၂ ပတ်နောက်ကျနိုင်သည်။ လစဉ်ထိုးဆေးများကို ၁ ပတ်နောက်ကျနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် နောက်ကျတာကို ပုံသေ မလုပ်ပါနဲ့။ ဒါဟာ နည်းလမ်း၏ထိရောက်မှုကို လျှော့နည်းနိုင်ပါတယ်။ ဆေးထိုးသည့်နေ့စွဲကိုခြေရာခံရန် ဖုန်းအချက်ပေး သို့မဟုတ် စက္ကူပြက္ခဒိန်ပေါ်တွင်မှတ်၍ သုံးရန်စဉ်းစားပါ။
ကိုယ်ဝန်။ ဤနည်းလမ်းအသုံးပြုခြင်းကို ရပ်လိုက်သည်နှင့် ချက်ချင်းကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော် အချို့အမျိုးသမီးများတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် လများစွာ ကြာနိုင်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါက နောက်ထပ်ထိုးဆေး သို့မဟုတ် အခြားသန္ဓေတားနည်းကိုအသုံးပြုပါ။
ထိုးဆေးကို ရွေးချယ်ပါက တခြားလုပ်ရန် သိပ်မလိုပါ၊ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်အချိန်မှန်ဆေးထိုးရန်သာရှိပါသည်။
Sayana Press အကြောင်း ကြားဖူးပါသလား။ ၎င်းသည် ကိုယ်ဝန်ကို ၃ လကြာအောင်ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ကိုယ်တိုင်ထိုးဆေးဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်း အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် injectsayanapress.org ကို သွားပါ
သင် ထိုးဆေးကို စတင်သောအခါ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်ထားသောလူထုကျန်းမာရေးလုပ်သားနှင့်ဆွေးနွေးပါ။ ၎င်းသည်ဆေးထိုးပြီးအကာအကွယ်ပေးချိန်ကိုဆုံးဖြတ်ရန် သင့်ကို ကူညီလိမ့်မည်။
သွေးစက်ကျဆင်းခြင်းဟာ အချိန်ကြာရင် သက်သာလာတယ်။ ဒါကြောင့်အချိန်ပေးပါ
ထိုးဆေးသုံးပြီး တစ်နှစ်အကြာတွင် လစဉ်ရာသီမလာတော့ပါကမထိတ်လန့်ပါနှင့်! ဤနည်းလမ်းအသုံးပြုသူများအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဆေးထိုးနောက်ကျပြီး သင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေသည်ဟုထင်လျှင်၊ ကိုယ်ဝန်ကိုအမြန်ဆုံးစစ်ဆေးပါ။
ဆေးထိုးပြီး ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာပါသလား? မထိတ်လန့်ပါနှင့်! ဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုနေစဉ် (များသောအားဖြင့် ၂ ကီလိုဂရမ်အထိ) ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာနိုင်သည်။ စသုံးပြီး ၆လတွင် ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာသည့် အမျိုးသမီးများသည် ထိုးဆေးသုံးစဥ် ကိုယ်အလေးချိန်ဆက်တိုးရန်အန္တရာယ်ပိုများနိုင်သည်။ အချို့အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်သော်လည်း အချို့ကမူ မပျော်နိုင်ပါ။ ထိုသို့မဖြစ်အောင် နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်း သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့် သင်၏အစားအသောက်အလေ့အထများအကြောင်း တိုင်ပင်ပါ။
ကောင်းတဲ့အချက်များ – ထိုးဆေးများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သာမကသင်၏လိင်မှုဘဝအတွက် ကောင်းမွန်သောအရာများစွာရှိသည်။.
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ -သင်မပြောလျှင် မည်သူမျှမသိပါ
သင့်အားတိုတောင်းသော၊ နဲပါးသော ရာသီလာခြင်းများကို ပေးကောင်းပေးနိုင်မည်
အချိန်မီဆေးထိုးလျှင် ကိုယ်ဝန်ကိုကာကွယ်ရန် အလွန်ထိရောက်သည်၊
ကလေးနို့တိုက်နေစဉ် အသုံးပြုနိုင်သည် (လစဉ်ဆေးထိုးဆေးများမှအပ)
မကောင်းတဲ့အချက်များ – လူတိုင်းဟာ အနုတ်လက္ခဏာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို စိုးရိမ်ကြတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးများစွာအတွက်မူ ၎င်းတို့သည်ပြသနာမဟုတ်ပါ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲဟော်မုန်းများသွင်းပေးနေသောကြောင့် ကျင့်သားကျဖို့ လအနည်းငယ်လိုနိုင်သည်။ အချိန်ပေးပါ။
ပုံမမှန်သွေးဆင်းခြင်း၊ အထူးသဖြင့်ပထမ ၆လ-၁၂ လအတွက် (ဤသည်မှာ ကြာရှည်များပြားသောရာသီလာခြင်းများ သို့မဟုတ် ရာသီများကြား သွေးစက်ကျဆင်းခြင်း များဖြစ်နိုင်သည်)
အစာစားချင်စိတ် ပြောင်းလဲခြင်း (သို့) ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်း (အချို့သောအမျိုးသမီးများသည်ပထမနှစ်တွင် ၁-၂ ကီလိုဂရမ်ခန့်ရှိသည်။ အခြားအမျိုးသမီးများသည်ဘာမျှမရကြပါ။ )
အဖြစ်နဲသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ –
မျက်နှာ သို့မဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်ဆံပင်ကျွတ် သို့မဟုတ် ပိုများလာ
စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း သို့ မူးဝေခြင်း
ထိုးဆေး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ရပ်တန့်ရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။ အကယ်၍ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို သင် ခံနိုင်သည်ထက်ပိုပြီးခံစားရသည်ဆိုလျှင်၊ နည်းလမ်းများပြောင်းပြီး ကာကွယ်ထားပါ။ လူတိုင်း၊ နေရာတိုင်းအတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာ သတိရပါ။
* အမျိုးသမီးအနည်းစုအတွက်မူ ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိနိုင်ပါတယ် ကြုံရသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို သင်စိုးရိမ်လျှင် ထိုးဆေးထိုးပေးသူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
နည်းလမ်းမျိုးစုံတွင် သွေးစက်ကျဆင်းခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ သွေးစက်ကျဆင်းခြင်းကြောင့် ထင်သလောက် သွေးများစွာမဆုံးရှုံးပါ။
အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုစမ်းကြည့်ပါ။ IUD; ဆေးလုံး
အချို့သောနိုင်ငံများတွင်သန္ဓေတားဆေးများသည်စျေးကြီးနိုင်သည်။ ပြည်သူကျန်းမာရေးဌာန လူထုကျန်းမာရေးလုပ်သားတို့မှတဆင့် စျေးသက်သာသော (သို့) ငွေပေးစရာမလိုသော သန္ဓေတားဆေးများရရှိနိုင်သည်။
သင့်တွင်ပုံမှန်အဖော် ရှိပြီး ၎င်းကိစ္စများကို ပြောဆိုရန်အဆင်ပြေလျှင်၊ ကုန်ကျစရိတ်ကိုမည်သို့ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်ကို သင်ဆွေးနွေးလိုပေမည်။
ဒါက လိင်ဆက်ဆံလိုတဲ့ဆန္ဒအပေါ် သက်ရောက်နေရင် ဘာလုပ်ရမလဲ?
၎င်းသည် ထိုးဆေးသုံးသူများ၏ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော မကျေနပ်ချက်မဟုတ်သော်လည်း ဖြစ်လာနိုင်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် ပထမဆုံး မင်းရဲ့ဘဝမှာအခြားဘယ်အရာက လိင်ဆန္ဒကိုပြောင်းလဲစေသလဲဆိုတာ စစ်ဆေးဖို့ဖြစ်တယ်။ သင် စိတ်ဖိစီးမှုများနေသလား။ သင့်မှာ လူမှုဆက်ဆံရေးပြသနာရှိလား။ သင် လိင်ဆန္ဒကိုတိုးမြှင့်ရန် ထိုအရာအချို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ လေ့ကျင့်ခန်းပိုလုပ်ရန်၊ အိပ်ရာထဲတွင် ပုံစံသစ်များကြိုးစားရန်၊ သင့်ခံစားချက်နှင့်လိုအပ်ချက်များကို သင့်အဖော်နှင့်အတူ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ သင်အတွက် လိင်စိတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေသောအခြားအရာများကို သုံးသပ်ကြည့်ပြီး ၎င်းသည်ထိုးဆေးကြောင့်ဟုယူဆနေပါသေးက (ဟိုမုန်းနည်းပြီး ပြသနာဆက်ရှိနေသေးလျှင် ရပ်ရလွယ်သော) ဆေးလုံး၊ ကပ်ခွာပြား သို့မဟုတ် အဝိုင်းကွင်း သို့မဟုတ် (ဟိုမုန်းနဲ သော သို့မဟုတ် လုံးဝမပါသည့်) IUD ကို ပြောင်းရန်စဉ်းစားပါ။ diaphragmအမြှေးပြား အမြှေးပါး၊ အမျိုးသားကွန်ဒုံးများ သို့မဟုတ် အမျိုးသမီး ကွန်ဒုံးများ စသည့် ဟော်မုန်းမပါသော နည်းလမ်းများကိုလည်းသင်ကြိုးစားနိုင်သည်။
အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုစမ်းကြည့်ပါ။ IUD; ကပ်ခွာပြား ဆေးလုံး; အဝိုင်းကွင်း
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ သိပ်မကြာခင် ကိုယ်ဝန်ရချင်ပါက လစဉ်ထိုးဆေး၊ NET-EN (၂ လထိုးဆေး) သို့မဟုတ် အခြားဟော်မုန်းနည်းလမ်းများအသုံးပြုရန်စဉ်းစားပါ။ ဆေးလုံး၊ ကပ်ခွာပြား၊ အဝိုင်းကွင်း သို့မဟုတ် IUD အားလုံးသည် ထိုးဆေးထက် မျိုးပွားမှုမြန်မြန်ပြန်ပြန်ရနိုင်သည်။ အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံး၊ အမျိုးသမီးသုံးကွန်ဒုံး ကဲ့သို့ ဟော်မုန်းမပါသောနည်းလမ်းကိုလည်း သင်စဉ်းစားနိုင်သည်။
ခေါင်းကိုက်ခြင်းသည်ထိုးဆေး၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်တွင် ဆိုးဆိုးဝါးဝါးခေါင်းကိုက်ခြင်းများရှိပါက အခြားဖြစ်နိုင်ခြေ များကို အရင်စဉ်းစားပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုနည်းအောင်ကြိုးစားပါ၊ ၊ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်ရေပိုသောက်ပါ၊ အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပါ။ မသက်သာလျှင်၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းအကြောင်းပြောဆိုတိုင်ပင်ပါ။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းအတွက် အခြားအကြောင်းကို သင်ရှာမတွေ့ပါက နည်းစနစ်များကိုပြောင်းရန် IUD, ဆေးလုံး၊ ကပ်ခွာပြား၊ အဝိုင်းကွင်း ကိုစဉ်းစားပါ။
အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုစမ်းကြည့်ပါ။ IUD, ဆေးလုံး၊ ကပ်ခွာပြား၊ အဝိုင်းကွင်း
ဘာ့ကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားသလို ခံစားရသလဲ ?
စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းသည် ထိုးဆေး၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဖြစ်နိုင်သည်။ နည်းလမ်းများကိုပြောင်းရန် မစဉ်းစားခင် သင့်ဘဝမှာ အခြားဘာ့ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ဖြစ်စေနိုင်တာလဲ စဉ်းစားပါ။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ ထိုးဆေးသည်ဟော်မုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည် ပြသနာတစ်ခုဖြစ်နေသေးပါက ဆေးလုံး၊ ကပ်ခွာပြား၊ အဝိုင်းကွင်း စသည့်တိုလို သက်ရောက်ချိန်တိုသော ဆေးပမာဏနည်းသောနည်းကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားပါ။ သင်သည် IUD အမျိုးအစားတစ်ခုခုကိုလည်းစမ်းကြည့်နိုင်သည်။